भगवानलाई मुटुको भय ! | Hamro Doctor info@hamrodoctor.com
भगवानलाई मुटुको भय ! Home
भगवानलाई मुटुको भय !
Oct 17, 2016 12:10
3.6K0comments
चिकित्सा र सामाजिक कार्यमा चर्चित रहेका डा. भगवान कोइरालाको ‘स्पोर्ट प्यासन’ बारे धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । थुप्रैपटक वल्र्ड टेनिस च्याम्पियन बनेका रोजर फरेडरका फ्यान कोइराला राफेल नाडालले भनेजस्तै आफ्ना हरेक सेटमा जीवनमरणको सवाल रहेको भावले टेनिस खेल्छन् । ‘खेलमा उहाँलाई हार स्विकार गर्न मनै पर्दैन । हार्ने छाँटकाट देखेपछि त झन् र्याकेट फाल्ने, रिसाउने अनेक हर्कत सुरु गर्नुहुन्छ । फेरी मैदानबाट निक्लेपछि सामान्य भैहाल्नुहुन्छ ।’ मजाकमिश्रित भावमा पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ प्रा.डा. भगवान कोइरालाको ‘पोल’ खोले । हरेक बिहान मण्डिखाटारको टेनिसकोर्टमा भेटिने टेनिस कोर्टमेट हाइप्रोफाइल पर्सन्यालिटीको ध्याउन्न त्यस दिनको टेनिस जित्नु र पसिना निकाल्नुमै हुन्छ । तर, दशकौं दशक ब्याडमिन्टन खेलेपछि त्यसबाट मोहभंग भएर एकाएक टेनिसतिर लहसिएका डा. कोइरालालाई भने ‘टेनिस इज मच बेटर देन ब्याडमिन्टन’ लाग्न थालेको छ ।
कुनै इमर्जेनसी सर्जरी वाआइसियु केयर छैन भने हरेक बिहान डा. कोइराला कट्टु गञ्जील गाएर र्याकेट काँधमा बोकेर मण्डिखाटार टेनिस कोर्ट पुगिहाल्छन् । यो उनको पछिल्लो ५-६ वर्षको दिनचर्याे हो । टेनिस खेल्न पनि यहीँ आएर सिकेका हुन्– मुटु रोगका प्रसिद्ध चिकित्सक कोइरालालले । ‘ब्याडमिन्टन त उता रसिया र अमेरिका हुँदैदेखि खेलेको हो, म्याच पनि थुप्रै खेलियो युनिभर्सिटीमा छँदा’ उनले पुराना दिन सम्झिए । तर, सात वर्षअघि खेलने क्रममा ब्याडमिन्टन कोर्टमा लडेपछि उनको ब्याडमिन्टन मोह विस्तारै घट्दै गयो । त्यसपछि दैनिक व्यायामका लागि कोइरालाले विकल्प खोज्न थाले ‘अब हिडौं भने एक्लै के हिड्नु । १५ मिनेटमै बोर भैहाल्छ । त्यसपछि गल्फ खेल्न थालें तर त्यसले व्यायाम पुगेन । त्यसपछि टेनिस रोजें ।’ उनले सुनाए । टेनिस खेल्दा प्रशस्त व्यायाम पनि हुने, रमाइलो पनिहुने कोइरालको निश्कर्ष छ । ‘सुरु सुरुमा कुर्कुच्चा दुख्ने, कुमको जोर्नी दुख्ने, मांशपेशी दुख्ने भयो । तर, छाडिनँ । अहिले ठिकै छ । यो टेनिस गज्जवको खेल रैछ ।’ थुप्रैपटक वल्र्ड टेनिस च्याम्पियन बनेका रोजर फेरेडरका फ्यान कोइरालाले आफ्नो टेनिस लगावबारे स्पष्ट पारे । ‘राफेल नाडालले भनेजस्तै डा.साव पनि आफ्ना हरेक सेटमा जीवनमरणको सवाल रहेको भावले खेल्नुहुन्छ ।’टेनिसमा सिपालु पूर्वएआईजी भण्डारीले थपे, ‘त्यसैले त उहाँ नजान्नेहरुको कोर्टबाट प्रोमोसन खाएर यता जान्नेहरुको कोर्टमा आइपुग्नुभयो ।’ दुई भागमा विभाजित टेनिसकोर्ट देखाउँदै भण्डारीले कोइरालाको टेनिस कौशलको प्रशंसा गरे । त्यसो त डा. कोइराला बिदाका दिनमा कहिलेकाहीँ गल्फ खेल्न पनि पुग्छन् । मुुटुरोग विशेषज्ञ भएर बिरामीहरुलाई व्यायाम गर्न सुझाव दिने कोइराला आफ्नै मुटु जोगाउन भने टेनिस खेल्छन् । उनलाई थाहा छ, ‘आफ्नो मुटु स्वस्थ नराखी मैले अरुको मुटु जोगाउन सक्दिनँ ।
दिनभर र राति अबेरसम्मको व्यस्तता र थकानलाई भुलाउन मात्र डा. कोइरालाले टेनिस रोजेका होइनन् । उनलाई पनि आफ्नो मुटुको स्वस्थताका लागि सक्रिय हुनु छ । भन्छन्, ‘समग्रमा मुटु स्वस्थ होस् भननेमा सचेत छु । तर, प्रतिदिन डराउँदिनँ । अरु अंगमा सानातिना चोट लागे पनि मुटु नै महत्वपूसचेत भएकाले पनि होला चिन्तितचाहिँ छैन ।’ मुुटुरोग विशेषज्ञ भएर बिरामीहरुलाई व्यायाम गर्न सुझाव दिने कोइराला आफ्नै मुटु जोगाउन भने टेनिस खेल्छन् । उनलाई थाहा छ, ‘आफ्नो मुटु स्वस्थ नराखी मैले अरुको मुटु जोगाउन सक्दिनँ ।’ ‘हाम्रो डक्टर’ मासिकबाट